I-Loft/Penthouse enombono ophezulu - I-Airbnb
I-Loft/Penthouse enombono ophezulu
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Rahim
Indawo yami ivulekile kakhulu, inazo zonke izinsiza ezidingekayo ukuze uhlale unethezekile futhi iseduze nenkaba yedolobha. Itholakala endaweni ethulile futhi eluhlaza e-Baku, eduze ne-Central Park. Uzoyithanda indawo yami ngenxa yokukhanya, umbhede othokomele, uphahla oluphezulu nokubukwa okuphezulu kwedolobha. Indawo yami ilungele izithandani, abantu abazihambela bodwa, abahambi bebhizinisi, imindeni (enezingane), kanye namaqembu amakhulu.
Ifulethi le-Penthouse elinombono omuhle kakhulu wedolobha enkabeni ye-Baku. Ukukhanya okuningi, indawo eningi, ezitezi ezimbili eziphezulu zesakhiwo. Le ndawo iseduze ne-Icheri Sheher (Idolobha Elidala), iDrama Theatre kanye ne-Hyatt Regency. Kulula ukuhamba. Leli fulethi lihlukile ngohlobo lwayo e-Baku. Ingakwazi ukuhlalisa ngokunethezeka iqembu elikhulu obekungadingeka libhukhe amagumbi angu-3 noma angu-4 ehhotela.
4.62 · 61 okushiwo abanye
I-Narimanov avenue ingenye yemithambo emikhulu yokuthutha yedolobha, futhi indawo inikeza ukubukwa okuhle kwedolobha kusukela phezulu kwe-amphitheatre yase-Baku. Ibanga eliya eFountain Square naseNizami Street liyi-1.2 km, ukuya esikhumulweni sezindiza - 22 km.
Ngizokwazi ukusiza izivakashi ngesiNgisi, isiRashiya, isiTurkey nezinye izilimi phakathi naso sonke isikhathi sokuhlala kwazo. Ngingasiza futhi ukuhlela ukudluliswa kwesikhumulo sezindiza, izinkambo, njll.